သင်ခန်းစာများ — MYSTERY ZILLION
September 2008 edited October 2008 in Project
This course does not allow public access ဒီလိုစာတန်းကြီးပေါ်လာပြီး ဖတ်လို့မရတော့ဘူးဗျ..
အမ် ...register လုပ်ပြီးပြီလား
လုပ်ပြီးပြီဗျ...... သင်ခန်းစာ အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူး.....တချို့ဟာတွေက ရတယ်.. တချို့တွေက မရဘူးဖြစ်နေတယ်.. အဲဒါဘာလို့ဘာလဲဗျာ........ ရှင်းပြပေးပါ......
အကုန်လုံးက သင်မှမသင်သေးကြတာကို... ခေါင်းစဉ်ပဲရှိသေးတယ်။ ဆရာတွေ မသင်သေးတာတော့ ဝင်မရပါ
Htin Yar Sai
but i don`t know how to learn
Htin Yar Sai wrote: »
ကိုလားမသိဘူး ကိုထင်ရာစို်င်း ရေ
register လေးကို www.edu.mysteryzillion.org မှာလုပ်လိုက်ပါ
အဲဒီ ထဲက စာအုပ်ကိုဒေါင်းပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ နားမလည်ပါကပြန်မေးပါရန်
I can't download any book
i just want you to send Gmail to my account [email protected]
I will thzalot to you!
Here ,connection is so bad.
Htin Yar Sai :77:
ဒီမှာကတော့(Myanmar) connection ကသူလိုငါလိုပါဘဲ။
တခါတလေ ကျော်ခွရသေး။ size သိပ်မကြီးပါဘူး။download link တောင်ရှာပေးပြီပြီးဘဲ Htin Yar Sai.....
:2: yes i will do so ...:((....i triedy it for about hours...
hours and hours gone...nothing happen....:((
:2: yes i will do so ...:((....i tried it for about hours...
ကျနော်လည်း အဲဒီမှာ ၀င်ပြီးတော့ စာသင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ဒါပေမဲ့လို့ မရသေးဘူးဆိုတော့လည်း ...ကျနော်တို့ စောင့်မျှော်ကြရမှာပေါ့နော်.... စာအုပ်လေးတွေကို တခြားနေရာက (အလကား) :71:ရမယ်ဆိုရင်လည်း သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...